Momba anay - Henan Zhancheng Trading Co., Ltd.
HENAN ZHANCHENG Trading Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2016 ary miorina ao an-tanànan'i Zhengzhou, faritanin'i Henan, tobin'ny eisai lehibe indrindra eto an-tany. Ny orinasan-tsika dia mitarika mpanamboatra izay manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny famokarana fanafody ara-pitsaboana toy ny akanjo tsy misy tenona fandidiana, ny fonosana, ny kitapo / fonosana fandidiana, ny spaonjy, ny rivotra, ny vokatra polymer avo, ny vokatra fanatoranana sns.
Ny tale jeneralinay dia teraka tamina fianakaviana ambanivohitra. Nazoto sy nianatra izy hatramin'ny fahazazany. Nanantena ny ho tonga dokotera ny ray aman-dreniny. Nahita sy nandre fijaliana maro vokatry ny aretina, lozam-pifamoivoizana ary ady avy amin'ny fahitalavitra, radio, ary gazety izy. Nahita ny fijalian'olombelona tao amin'ny hopitaly koa izy, koa naniry ho dokotera rehefa lehibe ka nanao zavatra ho an'izao tontolo izao. Saingy indrisy, tsy nahavita nandalo fanadinana fidirana teny amin'ny oniversite indroa izy ary tsy niditra tamin'ny sehatry ny fitsaboana. Tamin'ny taona fahatelo dia niova ho toekarena izy. Te handray anjara kely amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny varotra ivelany izy. Rehefa nipoaka ny viriosy tamin'ny taona 2020, ireo fitaovana fanoherana ny valanaretina (sarontava, akanjo fiarovana sns) novokarin'ny orinasanay dia namidy tamin'ny tsena eropeana tamin'ny vidiny mirary ary tsy nahazo tombony velively. Ary ny vokatra rehetra dia mendrika, tsy misy fitarainana. Izany no fahatsapan'ny orinasanay ny andraikitra ara-tsosialy ho an'ny firenentsika sy ho an'izao tontolo izao.
Izahay dia orinasa famokarana sy varotra azo zahana fanafody fanta-daza any Shina ary manana rafitra fitantanana kalitao feno izahay miaraka amin'ny fanamarinana ISO9001, ISO13485 ary CE. Ny vokatray dia namidy tamin'ny faritany telopolo mahery any Sina ary nanondrana tany amin'ny firenena maro hafa manerantany. Miorina amin'ny fitsipiky ny "Fahamarinana sy fahatokiana, kalitao voalohany, tombontsoa iraisana ary fandrosoana iraisana", dia nahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifa anatiny sy vahiny izahay.
Raisinay an-tanan-droa ny namana sy ny mpanjifa rehetra eran'izao tontolo izao hitsidika anay, ary hiara-miasa amin-kitsimpo amin'ny fananganana ny fifandraisana sy finamanana maharitra.